musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » 22 YES, 250 NO: Zurab Pololikashvili for UNWTO Secretary-General
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Trending Now • Wtn
Kwangosara mavhiki maviri kusvika UNWTO General Assembly yasangana muMadrid kuti isarudze kana kurudziro ye Executive Council kubva muna Ndira yekusimbisa Secretary-General iripo kune imwe temu ichasimbiswa.
Vazhinji vari muindasitiri yezvekushanya pasi rose vanotarisira kuti makurukota ezvekushanya avhure nzira yesarudzo itsva nekuda kwehuwandu hwemibvunzo nenyaya dzakapa SG yazvino chinzvimbo chake.
Kana 1/3 yenyika dzekuvhota paMusangano Mukuru unouya ikasazosimbisazve Zurab Pololikashvili kwechikamu chechipiri seSecetary General yeUNWTO, pane nzira iri nyore yakatotangwa yekugadza anotsiva.
Kana pasina kusarudzwazve kweMunyori Mukuru, General Assembly ichatora chibvumirano muchirongwa che9 cheSarudzo yeSecretary General, apo inoraira Executive Council kuvhura nzira nyowani yekudomwa kweUNWTO. Secretary General.
Ongororo yakaitwa na eTurboNews inoratidza kurambwa kwakanyanya kwekusimbiswazve kwaZurab Pololikashvili.
eTurboNews yakakumbira vashumiri, vamiririri, uye nhengo dzepamusoro-soro dzepasi rose dzekufambisa uye kushanyirwa kwemabhizimisi kuti vape pfungwa dzavo pamusoro pekusarudza zvakare Munyori Mukuru weUNWTO kune imwe nguva yechipiri.
Temu yechipiri yakakurudzirwa nemusangano weUNWTO Executive Council muna Ndira 20, zvichisimudza tsiye dzakawanda pamusoro pemaitirwo akaitwa.
eTurboNews kubva nhasi akagamuchira mhinduro 272 ne 22 chete vachida kumusimbisa semukuru weUNWTO kwechipiri.
Mhinduro idzi dzakabva kuAlbania, Austria, Argentina, Aruba, Australia, Bangladesh, Bahamas, Barbados, Bulgaria, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Ecuador, Eswatini, France, Germany, Georgia, Ghana, Hong Kong, Hungary. , India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Ireland, Jamaica, Jordan, Kenya, Latvia, Malaysia, Mauritius, Mexico, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nigeria, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Saint Lucia, Senegal, Sierra Leone , South Africa, Saudi Arabia, Seychelles, Spain, Somalia, Sweden, Syria, Tanzania, Thailand, Uganda, UAE, UK, Ukraine, Uganda, USA, Venezuela, Zambia.
eTurboNews vaverengi vari munzvimbo dzakakosha dzehutungamiriri vakaita zvinotevera kuti vasimbise (YES), kusasimbisa (NO). Dzimwe mhinduro dzakabva kunhume dzinovhota (makurukota), dzimwe dzakabva kunhengo dzinotungamira dzeindasitiri yezvekushanya nedzekushanya pasi rose.
Zvechokwadi kunzwa kwekusimbiswa kwechokwadi muMadrid mukati memavhiki maviri chete kunosarudzwa nevashumiri kana nevamiriri vanopinda vakamiririra vashumiri.
Zvinotora nyika imwe chete kukumbira vhoti yakavanzika uye kudzivirira kugadzwa nekurumbidza.
Vanamazvikokota vanofunga kuti izvi zvakakosha kuti pave nevhoti yakanaka yekusimbisazve.
Nharo dzakagamuchirwa dzevhoti yeYES:
Inoda kuenderera mberi mukudzoreredza Tourism muNormalcy yayo. Munguva ino yekuyedza uye chiitiko chisina kumboitika isu tinofanirwa kuve nemunhu anoziva nezveTourism nyaya uye akasimbisa network nenyika dzese.
Nezvakaitika kare Zurab Pololikashvili inogona kugadzirisa ikozvino yakaoma mamiriro ezvinhu. Tinofanira kutsigira kubva pasi pemoyo yedu mune zvese uye kuita sechikwata. Mwari wemasimbaose atikomborere tose. Ameen.
Anofanira kusimbiswazve, kana vanhu vachimuda kuti adzoke, aite kechipiri. Tinofanira kushinga uye takananga .
Nharo dzakagamuchirwa dzeVhoti HAPANA:
Kwave kusiri muvambi uye kubatanidza zvese
Wese munhu anokwanisa uye anoda kuona, kuteerera uye kunzwa kuseri kwechiitiko anoziva Zurab P. ndiye akaipisisa Gen Sec UNWTO akambova nawo. Nehurombo izvi zvinoratidzira kuGeorgia, uyo angangove asina simba rakawanda kudaro. Zvinoita seasina kukodzera ZP ari strow murume weimwe nyika ine simba izvo zviri nani hazvifanirwe kutaurwa pachena.
Haana kuita chero yakakosha kuedza kuita kuti UNWTO ive nani.
Iyo UNWTO inofanirwa kutorwa zvakanyanya. Uyu Secretary General haakurudzire kuvimba - James Hepple, Tourism Analytics
Kushaya kuvimbika; kushaya pachena; huwori, kubira mavhoti chii chimwe chaunofanira kuziva?
Anofanira kubuda uye kubvumira mumwe munhu ane hunyanzvi kumhanya UNWTO
Kana paine kupokana xam the process Bata sarudzo itsva. Kana akakunda zvechokwadi haaizonetseka kumira zvakare.
Semunhu aimbove mukuru weUNWTO ini handigamuchire nzira iripo yekutonga iyo institution yandakashandira nekutendeka kwemakore makumi matatu nematanhatu!
Sezvineiwo NOT- neoliberalism haibatsiri
Tume yekuchinja. Indasitiri inoda hutungamiriri hwakasimba uye zvematongerwo enyika zvishoma. Uyezve inoda kudyidzana kwakawanda pakati penyika nemasangano ane chekuita nekushanya.
Kana akasimbiswa zvinozoita kuti zvimwe kana zvese zvinotevera Kurasikirwa kwenhengo uye mari kubva kunhengo dzinobhadhara mari, Kurasikirwa kwekutendeseka, Kuparara kweUNWTO kana kurasikirwa nekubatana kweUN.
Kusava nechokwadi kwakanyanya kwaiperekedza mushandirapamwe wake. Kusarudzwa kwake kwenyika dzaakashanyira, pachinangwa cheUNWTO uye mhedzisiro yekushanya uku kwakapa kukahadzika pamusoro pekubuda pachena kwerutsigiro rwaakawana kubva ku Executive Council. Kutamiswa kwenzvimbo kuenda kuMadrid nekuzoregeredzwa kweKenya chimwe chikonzero chekutsvaga mhinduro isingapesane.
Haasi munhu akatendeseka ..zvaive zvinonyadzisa the last campaign with Minister Walter Mzembi..
Kana paine kusava nechokwadi pamusoro pekujeka kwenzira iyo Executive Committee yakasvika pachisarudzo chavo saka General Assembly haifanirwe kushandiswa setampu yerabha.
Nguva pfupi yadarika akatamisa General Assembly kubva kuAfrica kuenda kuMadrid, Spain pasina fungidziro kuKenya yakakwidza nyaya iyi.
MNeed kuenderera mberi mukudzoreredza Tourism mune yayo yakajairika. Munguva ino yekuyedza uye chiitiko chisina kumboitika isu tinofanirwa kuve nemunhu anoziva nezveTourism nyaya uye akasimbisa network nenyika dzese.
Ane huwori uye aparadza sangano UNWTO inoda mutungamiri kwete mudzvanyiriri ane huori.
Tinoda sarudzo yakanaka
General Zurab Pololikashvili akasarudzwa zvakare ne Executive Council muna Ndira mumamiriro ezvinhu asina mubvunzo. Ndinovimba kuti chiedza chakavimbika uye chakakomba chinouya kumweya yavo uye zvakare kuhurumende kubva kunyika dzavanomiririra.
Kurasika pachena, kubata kwakashata kwesangano rega, mitambo yakawandisa kuchengetedza basa rake, kusava neunyanzvi uye kuvapo, kusimudzirwa kwevanhu vasina kururama mukati meUNWTO sezvavanosarudzwa nezvimwe zvinofarirwa kupfuura unyanzvi hwemhizha uye kukwanisa.
Tinoda shanduko. Africa inofanirwa kupihwa mukana wekutungamira UNWTO kekutanga.
Iye munhu anotanga. Haazive ABC yetourism. Ari kusimudzira vanhu vake pachake mukuzvidza zvachose mitemo nemirau.
Haatombokodzeri kuita basa racho.
Kuita zvematongerwo enyika eSpain kuenda kuPopular Party Congress (bato rinopikisa). Zvinoenderana neUN Ethics Hofisi: -Unofanirwa kudzivirira zviitiko zvezvematongerwo enyika zvinogona kuratidza zvakaipa paUN, kana kuderedza kuzvimiririra kwako uye kusarerekera. -Nzvenga kusimudzira zvinzvimbo zvezvematongerwo enyika kana kuratidza zvinotsigirwa nevamiriri vezvematongerwo enyika vari pabasa. -Usazvimiririre senhengo yeUN paunosaina zvikumbiro kana kuita chero chiitiko chezvematongerwo enyika. Zurab akaratidza paTwitter kupindira kwavo mune zvematongerwo enyika zveSpain: https://twitter.com/pololikashvili/status/1443230304240644096?s=20 https://twitter.com/pablocasado_/status/1443302875556466690?s=20
Kugadzwa kwaDhirekita weNhengo Dzakabatana, Mr Ion Vilcu: Aimbove Mumiriri weRomania kuSpain, ukuwo Zurab aive Mumiriri weGeorgia - Hapana ruzivo rwezvekushanya mune zvakaitika kuna Ion Vilcu.
Nhengo Dzakabatana dzakarasikirwa nezwi rese muUNWTO. -Nhengo zhinji Dzakabatana dzakasvitsa kushushikana kwayo kuUNWTO nekuda kwekuti hapana basa ririkuitwa, uye kuti Director vanongoshanda neboka rakasarudzwa reNhengo Dzakabatana, kazhinji dzichiuya kuMadrid.
Kungofungira nezvemamiriro ezvinhu asina mubvunzo musarudzo patsva kunopembedza kwete
Mumiriri murombo wekushanya kwepasirese kunyanya panguva yeCovid-19 dambudziko.
Pololikashvili yakaunza kunyomba kwevanhu, odium, uye kuzvidza paUNWTO. Hunhu hwake hwakaora hwave huchityisa. Haakodzeri zvachose kutungamira sangano iri uye acharamba achisvibisa zita raro nekuvimbika kana akaramba ari pachigaro. Ndinoti Good Riddance! Sangano rinoda mumiriri anovimbika nekuvimbika anga ari nyanzvi inozivikanwa yeindasitiri yekushanya - mumwe munhu akaita saCarlos Vogeler wekuSpain uyo Zurab akamubatawo zvakaipa.
Haamiriri zvinokosheswa nesangano reUN
Kune huori hwakawandisa.
Achiita seane huori zvachose. Kwete kuita UNWTO chero favour mukuona kwepasirese, rega kuenderera uye tsika ajenda: Mamwe ese eUNWTO/UN anofanira kupindira kumisa debacle uye kunyara.
Zvakwana! Munyori Mukuru weUN Organisation anofanira kunge ari munhu akavhurika uye anoshivirira. Uye zvechokwadi ruzivo rwakawanda mune zvese pfungwa. Iko hakuna nzvimbo yekunyengedza uye mitambo yakavharika mune yakadai nhanho Sangano. Taleb Rifai akamuunza pachinzvimbo ichi uye tinochirangarira zvakanaka! Mukutenda kweizvi, nekuda kwegodo remukurumbira uye kukosha kwemunhu uyu kunharaunda yepasi rose, akaparadzaniswa neUNWTO uye kutaurirana kwese kwakamiswa. Uku kurova pachiso kwete chete kwaTaleb, asiwo kune wese akavhotera Pololikashvili nekurudziro yaRifai. Nyika yose.
Zurab Pololikashvili haana tsika uye haana hunyanzvi hwekuve Munyori Mukuru weUNWTO - anofanirwa kuburitswa.